नबनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बेल्जियमबाट डिल्लीको पत्र
हिजो चुनाबी माहोलमा जेजसरी,जुन ढंगले जसको प्रचारमा लागेपनि वा मत विभाजनको क्रममा फरक फरक ब्याक्तिको बिरोध वा समर्थनमा लागेपनि नेतृत्व चुनीइ सकेको बर्तमान अबस्थामा तपाइहरुको सकारात्मक अभियानमा सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित सबै एनआरएनहरु एक ढिक्का हुनेछन। तर एकलौटि रुपले तपाइकै विभिन्न इकाईहरुको सुझाब र सक्रियतालाई बेवास्ता गर्ने प्रकारले जानुभयो भने संस्थागत अराजकता, बेथिति र विभाजित मानसिकता अझै बढेर जाने छ।
संस्थामा हुर्किदै गरेका अराजकता, अनुसासन हिनता, आर्थिक अपारदर्शिता र बेथितिहरुको बिरुद्ध सर्बप्रथम नीतिहरुलाई ब्यबस्थित गर्न आबस्यक हुन्छ।
पाइले चुनाबी परिणाममा मात्रै सन्तोष लिएर बस्ने र आफ्नो बिबेकलाई कैद गर्दै जानु भयो भने तपाइले अहिलेसम्म कमाएको प्रतिष्ठा खरानीको थुप्रोमा परिणत हुने छ । सल्लाह लिदा वा अभियानहरुको तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषयका दक्षहरुको सल्लाह लिन वा उनिहरुलाई परिचालन गर्न पक्कै कन्जुस बन्नुहुने छैन। क्षमतावान बिषय बिज्ञहरुको सल्लाहको खाँचो तपाइलाई निरन्तर खड्की रहने छ।
प्रिय एनआरएनए अध्यक्ष तथा मित्र कुमारजी ,
अनायास मनमा कुरा खेले र यो पत्र लेख्दैछु। देखि हाल्नुभयो एनआरएनए भित्रको राजनैतिक खेल। एनआरएको सम्मेलन अगाडी पछाडीका यस्ता अनगिन्ति गतिविधिको हामीले समिक्षा गर्न जरुरी भएको छ।
अहिलेको निर्वाचित टीमको अगाडी र पछाडी धेरै किसिमका चुनौतीहरु पहाड झैँ तपाइहरुको मुख हेरेर उभिएका छन्। हाम्रो एनआरएनए भित्रका यावत बिकृतिको समयमा नै आशादित हल खोज्न सकिएन भने संकट अझ गहिरिएर जाने सम्भावना छ। यी चरित्रगत, प्रक्रियागत,बैधानिक र संस्थागत कमजोरीहरुको पूर्ण निराकरण गर्नमा यो टिम तपाइंको नेतृत्वमा सम्झौताहीन तरिकाले अगाडी बढ्नुको अब विकल्प रहेन । हाम्रो एनआरएनए भित्रका यावत समस्याहरुको निराकरणमा लाग्नु अबको तपाइहरुको पहिलो कार्यभार हुनेछ । त्यसको लागि बिगतका सम्पूर्ण कार्यकालहरुको गम्भीर समिक्षा गर्नु आबस्यक छ। हिजो चुनाबी माहोलमा जेजसरी,जुन ढंगले जसको प्रचारमा लागेपनि वा मत विभाजनको क्रममा फरक फरक ब्याक्तिको बिरोध वा समर्थनमा लागेपनि नेतृत्व चुनीइ सकेको बर्तमान अबस्थामा तपाइहरुको सकारात्मक अभियानमा सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित सबै एनआरएनहरु एक ढिक्का हुनेछन। तर एकलौटि रुपले तपाइकै विभिन्न इकाईहरुको सुझाब र सक्रियतालाई बेवास्ता गर्ने प्रकारले जानुभयो भने संस्थागत अराजकता, बेथिति र विभाजित मानसिकता अझै बढेर जाने छ। त्यसैले अब एनआरएनएले डायस्पोराका आम नेपालीहरुको भावनाको प्रतिबिम्ब बन्ने प्रयासलाई पहिलो प्रार्थमिकतामा राख्नु आबस्यक छ। त्यसको लागि एनआरएनएले डायस्पोराका अधिकतम नेपालीको वर्ग विश्लेषण , पहुच , र एजेन्डाहरुको पहिचानबारे नयाँ धारणा बिकास गर्नु आबस्यक देखिन्छ। एनआरएनएका वास्तविक प्रतिनिधि को हुन् वा हुनु पर्छ,उनीहरुका बास्तबिक समस्याहरु के के हुन्, उनीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व बैधानिक रुपले स्थापित गर्न के कुराको थपघट गर्नु पर्ने हो रु यी कुराहरुले नै यो संस्थालाई निरन्तर निरोगी,स्वस्थ र दिर्घजीबी बनाउने छ। साथै नयाँ रुपान्तरित बिधि अनुशार चालिने भूमिकाले नै हाम्रो संस्थाको एक(एक बैराग, निराशा, अराजकता र गतिहीनता क्रमश हटाएर लैजानेछ ।
कुमारजी,विश्व भरका एनआरएनहरुले तपाइको अभियानका शुरुवाती चरण देखि नै तपाइँ प्रति अगाध विश्वास,सम्मान र मायाँ दिनुभएको छ । तपाइले आँफुलाई त्यसको योग्य बनाउनु भएको छ वा छैन त्यो तपाइले आँफै आत्मा समिक्षा गर्नु होला । हामीलाई लाग्छ,अहिलेसम्मको बाह्य भूमिकामा तपाई अब्बल नै हुनुभएको छ। आन्तरिक भूमिकामा तपाइको समिक्षा पक्कै तपाइकै पुर्वबत सहकर्मी टिमले गरेको होला। अध्यक्ष भए पछि तपाइको भूमिका नेतृत्वदायी र प्रभावकारी हुनु पर्नेछ।
तपाई जत्तिकै प्रभावकारी भूमिका र संसार भरिका एनआरएनको एक हिस्साको नेतृत्व गरेका तपाइकै प्रत्यासी उपविजेता सहकर्मी कुलजीको बिश्वास लिने र उहाँका अनुभब र भूमिकालाई पुँजीकृत गर्न सक्नु तपाइको नेतृत्व कौशलको अर्को परिक्षण हो। त्यसमा तपाइको सालिनता, स्वभाब र सामाजिक भावना पक्कै पनि सहायक हुने छ। तपाइले चुनाबी परिणाममा मात्रै सन्तोष लिएर बस्ने र आफ्नो बिबेकलाई कैद गर्दै जानु भयो भने तपाइले अहिलेसम्म कमाएको प्रतिष्ठा खरानीको थुप्रोमा परिणत हुने छ । सल्लाह लिदा वा अभियानहरुको तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषयका दक्षहरुको सल्लाह लिन वा उनिहरुलाई परिचालन गर्न पक्कै कन्जुस बन्नुहुने छैन। क्षमतावान बिषय बिज्ञहरुको सल्लाहको खाँचो तपाइलाई निरन्तर खड्की रहने छ। अहिलेको एनआरएनए हिजोका अग्रजहरुले नेतृत्व गरेको भन्दा प्रक्रियागत, एजेण्डागत,संख्यागत र अपेक्षागतरुपमा नितान्त बेग्लै भै सकेको छ। त्यसैले हिजोका अभियन्ताहरुबाट आजका अपेक्षाहरुको पूर्ण समाधान खोज्ने भुल गर्नुभयो भने तपाईको कार्यकाल इतिहाँसमा एक असफल नेतृत्वको रुपमा दर्ज हुने छ। मैले तपाईंप्रतिको सोही मैत्री र सद्भावका कारण केहि सुझाबहरु पस्केको हुँ । मलाई आशा छ, यसमाथि तपाईंहरूले अवश्य पनि गम्भीर विचारका साथ मनन गर्नु हुनेछ ।
संस्थागत रुपमा नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अब तपाईंको ऐतिहासिक उत्तरदायित्व के हो रु एनआरएनएको रुपान्तरणको लागि तपाई लगायत नेतृत्वको टिमले के गर्नु आबस्यक हुन्छ रु अघिल्लो नेतृत्वहरुले यी कुराहरुको बोध नगर्दा अहिले संस्थामा धेरै बिकृतिहरु भित्रिएका छन । यसबारे तपाईंले गहन बिचार गर्नु होला । मलाई लाग्दछ, तपाइँले अभ्यासगत रुपमा पारखी टिम पाउनुभएको छ । सबै बिजेताहरु अनुभबले खारिएका छन्। बिकराल समस्याहरुले घेरिएको र ऋणको पहाडले थिचिएको जर्जर संस्थालाई प्रयत्न गर्नुभयो भने तपाइहरुले समुन्नत बनाउन सक्नु हुनेछ।
बिगतको समीक्षामा निर्मम बन्न सक्नुहोस किनकि त्यो समीक्षाले नै तपाइको आगामी कोर्षलाई सरल, सुगम र भबिष्य प्रति उत्तरदायी बनाउने छ । भनिन्छ बिगतको अनुभब, बर्तमानको विश्लेषण नै आगामी दिनका पाठहरु हुन्। बगतका तिनै बिकृति, विसंगति र बेथितिले नै रुपान्तरणको शुरुवात गर्दछ। ब्याक्तिगत रुपमा पनि तिनै कुराहरु लागु हुन्छन भने सँस्थागत रुपमा पनि यिनै कुरा सत्य हुन् । अब संस्थागत रुपान्तरणमा एउटा क्रान्ति आबस्यक छ। क्रान्ति रुपान्तरणको साधन हो भने नेतृत्व कौशलता साध्य। ति मध्ये कुनै एक बिना अर्को बाँच्न सक्दैन। नजोतिएको जमिनमा जतिसुकै उर्बर बिउ रोपे पनि त्यसले उत्पादन दिन सक्दैन। त्यसैले जमिन जोतेर खेतियोग्य बनाउने कर्म क्रान्ति हो। त्यसले उत्पादनलाई सहज र सम्भब बनाउँछ।
संस्थामा हुर्किदै गरेका अराजकता, अनुसासन हिनता, आर्थिक अपारदर्शिता र बेथितिहरुको बिरुद्ध सर्बप्रथम नीतिहरुलाई ब्यबस्थित गर्न आबस्यक हुन्छ। त्यसपछि संस्थागत लक्षहरु निर्धारण गर्दै स्व अनुकुल बिधानको रुपान्तरण अर्को आबस्यक सर्त हो। यदि अब तपाइको लक्षमा बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन। ब्याड तयार भएपछी निर्धारित लक्षको लागि बिज रोप्न सकिन्छ। जिबन र जगतको यो नै लक्ष प्राप्तिको उत्तम तरिका हो। बिगतमा यहि बाटो बिर्सेर संस्थाको महत्वपुर्ण कार्यभार बिर्सेका छौँ। कसैका सकारात्मक सुझाबहरुलाई अझैपनि उपेक्षा गर्छौँ र असफलता पछि निरास बन्छौँ। बिगतमा त्यहि भयो। त्यो बेलाको नेतृत्वले यिनै लक्ष प्राप्तिका महत्वपूर्ण कुरालाई पन्छाउदै गयो र संगठनलाई यथास्थितिबाट माथि उठाउन सकेन। दलाल, कामचोर,नोकरशाह र सुदखोरहरुको चक्रब्युहबाट संगठन मुक्त हुन सकेन। नेतृत्व रक्सीको नशामा दुनियाँको रमिता बन्यो। तर हामी निरिह ‘बिचरा,ए १ होर !’ भन्दै नाक खुम्च्याएर बस्यौँ ! कर्मचारी नियुक्ति,पजनीको अदालती लपेटाले आर्थिक व्ययभार बोझिलो बन्यो। सरकारी जग्गामा बनेको कार्यालय लुटेराहरुको खेलले आफ्नो हुन सकेन। १४ करोड रुपयाँ कुन उडुसको मुखमा पस्यो कसले खोज्ने !अझै अनैतिक र असामाजिक चरित्रलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिएन। संस्था आर्थिक ऋणले चुर्लुम्म डुब्यो। इमान्दार एनआरएनहरु आवाज बिहिन बन्यौँ र डायस्पोराका पत्रकारहरु नेतृत्वको धन्सारका कर्मचारी जस्ता भए। त्यसैले संस्थागत रुपान्तरणको लागि, नेतृत्वको रुपान्तरणको लागि र विधिगत रुपान्तरणको लागि एनआरएनएमा क्रान्ति आबस्यक छ । त्यसको नेतृत्व गर्ने हिम्मत छ त कुमारजी! अहिलेको हाम्रो अपेक्षा बस यत्ति हो।
कुमारजी ! हजुरलाई पक्कै अबगत नै छ, चाहे त्यो राष्ट्रिय समन्वय परिषद, क्षेत्रीय परिषद वा अन्तराष्ट्रिय परिषदको नै किन नहोस नेतृत्वमा धेरै खराबिहरु छन् । ति खराबी अभियन्ताका आचरणमा पनि छन् र विधिगत कार्यन्वयनमा पनि छन्। ति सबै खराबीको एक लामो लिष्ट तयार गर्न सकिन्छ। तिनीहरूमध्ये केही प्रमुख कमजोरीहरु नसच्याएसम्म यो संस्थाबाट राम रमिता बाहेक अन्य गुणात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिदैन। अत यो संस्थाको अबको नेतृत्वले रुपान्तरणका विधिहरुलाई कसरि आत्मसात गर्ला,त्यो त भविष्यले नै देखाउने छ। जसलाई छोटकरीमा निम्नानुशार राख्ने धृष्टता गरेको छु झिजो नमानी पढी दिनुहोला ।
१) आशाको पुनार्जागृति र अनुशासन : प्रथम कुरा अबको नेतृत्वले निराश एनआरएनहरुको आशालाई पुनर्जागृत गर्नु आबस्यक छ । आगामी लक्ष निर्धारण, आचरणगत सुधार र कार्यद्वारा नै यो सम्भब छ। भिन्न देशहरुमा भएका नेपालीहरुका समस्याहरुका रुपहरुको पहिचान,उनीहरुका भावनाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र उपयुक्त बिधिमार्फत समाधान केन्द्रित हुने तरिका आबस्यक छ। त्यसमा नेतृत्वको त्याग, समान दृष्टिकोण र चरित्रवान नेतृत्व पुर्वसर्तहरु हुन्। बिधानको रुपान्तरण र रुपान्तरित बिधि अनुकुलको आचारणले नेतृत्वलाई अनुसासित र सम्मानित बनाउछ। सबैको साथ पाउन नेतृत्वको टिम अनुसासित एवं सम्मानित हुनु आबस्यक छ।
२) खराब आचरण : हामी हाम्रो आचारणको बारेमा चिन्तित हुने कि नहुने । आर्थिक लाभको लागि संस्थामा बसेको अझ नेतृत्वमा भएको मान्छेले जेपनि गर्ने रु सर्बप्रथम जो जति नेतृत्वमा छौँ सबैले आत्मा समिक्षा गरौँ। एनआरएनको नेतृत्व भनेको ८० लाख नेपालीको नेता हो। यदि त्यो नै नैतिक रुपले, आर्थिक रुपले र सामाजिक रुपले भ्रष्ट छ भने अरु एनआरएनले उनीहरुबाट के सिक्ने रु उनीहरु अनुसासित हुनै पर्छ, सामाजिक,नैतिक र आर्थिक रुपले समाजकको आदर्श द्रष्टा बन्नै पर्छ। नेतृत्वको जिबन पद्धति आम नेपालीलाई पाच्य हुन सकेन भने डायस्पोराका ८० लाख नेपाली र उनीहरुबीच दुरी बढ्छ। दुरी बढ्नु भनेको अंतरसंघर्षको सुरुवात पनि हो। जसले नेतृत्वको सम्मान र सुरक्षाको चुनौतीलाई बढाइ दिन्छ। त्यो नेतृत्वका कुनैपनि कार्यक्रम वा अभियान सफल हुनै सक्दैनन्।
३)चाकडी संस्कृति र भ्रष्ट नियत : अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा एनआरएनए नेतृत्वमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको उत्तरदायित्ववोध कम छ । राज्यसंग बैधानिक र डायस्पोराको हितलाई मध्यनजर गरेर बनाइने सम्बन्धको आफ्नै महत्व हुन्छ। त्यो आबस्यक मात्र नभएर अत्यन्त जरुरि पनि हो। तर आरोप नेतृत्वमा पुग्नको लागि लुकेर गरिने राजनैतिक सम्बन्धको हो । आर्थिक लेनदेनको हो । नेतृत्वको नेपालका नेताहरूको लुकेर गरिने अपारदर्शी चाकडीको मूल अभिप्राय संगठनको सहुलियतमा लिने व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टचारीहरूसँगको कनेक्सन बलियो बनाउनु हो भन्ने आरोप समेत छ । अबको नेतृत्वले कमसेकम यसलाई सुधार गर्नु पर्छ।
४) अन्तर संघर्षको शुरुवात : तपाइलाई भोग्नु नपरेकोले थाहा नहोला कुमारजी तर हामीले भोगेको कुरा हो यो। एनआरएनएको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि नेतृत्वलाई अर्कै ग्रहबाट आएको अद्भुत भान हुने रहेछ। जसले गर्दा उहाँहरु एनआरएनहरुसंग संगै बस्दा समेत असजिलो अनुभब गर्नु हुन्छ । हाम्रो संदेश र उपयोग खालि चुनाबको बेलामा मात्र हो अन्यथा फोन समेत उठाउनु हुन्न्न। त्यसको रिप्लाई गर्नुत धेरै परको कुरा। त्यो स्वयम् मैले भोगेको कुरा हो। त्यस्तो खालको घृणा वा वर्ग विभेद पनि अन्तर संघर्षको शुरुवात हो। एनआरएन र नेतृत्ववीच अन्तर सम्बन्धको सीमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कुरा अनुभब गाम्य कुरा हो । यो हाम्रो नेतृत्वको चुत्थो दुर्गुण हो, यसलाई सुधार्न आबस्यक छ । सायद यो दुर्गुण तपाइमा समेत हुन सक्छ ।
है कुमारजी !
त्यस्तै एनआरएनएमा भर्खर डायस्पोरामा स्थापित हुन थालेका टाठा बाठा ब्यापारीहरुको भिडमात्र जम्मा हुन थालेको छ । मजदुरहरुले यो संस्थालाई हाम्रो भन्न सकिरहेका छैनन्। अर्को कुरा पनि छ कुमारजी,संस्थाद्वारा लगानीको कुरा गर्दा, नागरिकताको सवाल बाहेक अन्य सवालमा नेतृत्वले नेपाल भित्र्याएका ब्याबशाय केवल नाफाको लागि भैदियो । सेवामुलक लगानीमा चासो नै छैन। राज्यको रुपान्तरण, डायस्पोराका मजदुरहरुका सामूहिक मुद्दा र अरुलाई स्थापित गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रम छायाँमा पर्नाले डायस्पोराको बहुमत मजदुर वर्ग एनआरएनएको अभियानमा समाहित हुन अनिच्छुक देखिदै गएको छ । यो गम्भीर बिषय हो कि हैन रु ति कारणबारे सतही घोचपेच बाहेक गम्भीर बहसमा एनआरएनए अझै पसेको छैन । अहिलेका मुख्य मुद्धाहरु के हुनु पथ्र्यो र संगठनमा के भैरहेको छ रु यो बहसलाई भित्र नहुली यो संघको रुपान्तरण सम्भव छैन । हेरौँ,अब तपाइको नेतृत्वले के गर्छ ?
५) एनआरएन सापेक्ष बिधि र अनुशासनको कारवाही : सुधार्नु पर्ने कुराहरुमा सर्वप्रथम नेतृव छनौट बिधि नै आउँछ । त्यसपछि माफिया र दलाल प्रवृतिको विरुद्ध अभियान, समृद्धिको आधारबारे बहस, आर्थिक माफियाकरण र मतदाता किनबेच लगायतका खराब प्रवृतिको बहिस्करण र कारवाही, पारदर्शी नेतृत्व र आर्थिक पद्धतिको आधुनीकिकरण आदि पर्दछन् । अबको एनआरएनएको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डा सेल्फ अगर्नाइजेशन हो । स्वायत्त संगठन, कसैको हस्तक्षेप बिनाको संगठन, दलाल माफियारहित सुद्ध देशभक्त नेपालीहरूको संगठन र अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मवीरहरूको संगठन । डायस्पोराका सम्पूर्ण मजदुर बाहिर अनि दलालमात्र भित्र रहे र संगठन देशभक्त नेपालीबाट अलग्गियो भने यो संगठनलाई बचाउन सकिँदैन कुमारजी ।
उम्मेदवार शुल्क कम राखौं बनेका थियौ तर यो पटक भएन । अर्को पटक तपाइले नै सदस्यता शुल्क निशुल्क बनाउने प्रण गर्नु भएको छ , त्यस्तै सम्मेलन ब्यबस्थित गर्दै घरबाट भोट हाल्न सकिने बनाउछु भन्नु भएको छ। त्यो चुनाबी पद्धतिमा सकारात्मक रुपान्तरण नै हो। त्यसले कमसेकम चुनाबमा हुने खर्चलाई कम गर्छ ।
६)अध्ययन र अनुगमन : पूर्ववत नेतृत्वको अर्को खराबी भनेको नेतृत्वमा अध्ययन अनुगमन बिधि नै छैन । उदाहरणका लागि संगठनको बिधान र घोषणापत्रसम्मको उपयुक्त ज्ञान नभएका धेरै अहिलेपनि नेतृत्वमा आए होलान । भोगेको कुरा गर्छु मैले।बिधान र घोषणापत्रको बारेमा उनीहरुसंग एनआरएनले कुरा राखेभने ुत्यो त पढ्नु पर्छु भन्दछन। तिनले के बिधि सिकाउलान र पालना गर्लान। कमसेकम आधारभूत कुराहरु नेतृत्वमा पुगेकाहरुले जानकारी राख्नै पर्छ। अबका नेतृत्व अध्ययनशिल बनुन कमसेकम बिधान, कार्यपत्र, घोषणापत्र। तब थाहा हुन्छ अब कुन कुन बिधि, पद्धति र धाराहरुको रुपान्तरण आबस्यक छ। अबको नेतृत्वले यसमा अलिक दृष्टि पुर्याउला कि !
७)खर्चिलो सम्मेलन : यो संस्थाको अर्को समस्या हो क्षेत्रीय मिटिङ्गमा झन्डै करोडभन्दा माथि खर्च गरिदै आएको छ । तर उपलब्धि एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भन्दा ज्यादा देखिएको छैन । केन्द्रको के कुरा गर्ने !
यो सराद्धेमा बिरालो बाँध्ने प्रथाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय सम्मेलनहरु प्राय पाँच तारे होटलहरुमा गर्नुको अभिप्राय सम्मेलनका पाहुनाहरुको व्यवस्थापन मात्रै नभएर नेपालबाट बोलाइने पाहुनाहरुको भिषा समस्यासँग जोडिएर आउने समस्या हो। त्यसमा एनआरएनएमै जोडिएकाहरुले युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायतका स्थानहरुमा संस्थागत आडमा मानव तस्करी गर्ने गरेको आरोप प्राय लाग्ने गरेको छ । त्यसले के संकेत दिन्छ भने कमजोर यात्रीका लागि राम्रा होटलहरुको बुकिङ्गले भिषा लगाउने आधारलाई मजबुत बनाउने भएकोले त्यसो गरिएको हो । यी यावत कुरालाई ख्याल गर्दा क्षेत्रीय मिटिंगहरुको सिस्टम र संस्कृति दुबैलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । एजेन्डाहरुमा पनि परिणाममुखी बहस हुने गरेको देखिदैन । त्यसमा अब चासो जानु आबस्यक छ।
८)भद्दा संगठन र पारदर्शिताको अभाव : अहिलेको ग्लोबल सम्मेलनमा न त बिधान पास भयो,न त आर्थिक प्रतिबेदन। संगठनलाई १५ करोड रुपैया ऋण लागेको छ भनिएको छ तर कारण र त्यसको आधिकारिक पुष्टि गरिएको छैन। यसले के देखाउछ भने एनआरएनएको बिगत केवल नेतृत्वको मुखबाट चलेको रहेछ। नेतृत्वको खैजरी बजाउनेहरु दक्ष हुन् कि नहुन मतलब छैन, मनोनित गरिन्छ। लगौटिया यारको भरमा केन्द्रिय सल्लाहकार, अनररी अरु केके हुन् केके अनाबस्यक नियुक्ति गरिन्छ १ अब यो च्याप्टर बन्द गर्नु पर्छ। आबस्यक ठाउँमा सम्बन्धित ब्याक्तिको दक्षता हेरेर नियुक्ति गर्नु बान्छनीय देखिन्छ।
९) बिगतका नेतृत्वको समिक्षा र स्पष्टिकरण : संगठनभित्रका समस्याका कुरा गर्दा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिस्ट’ (आईसीआईजे)ले सन् २०१७ मा गरेको ‘पनामा लिक्स’मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापकले ट्याक्स हेवन मुलुकहरूमा लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा एनआरएनएका नेतृत्व वर्ग वा संस्थापकले देशमा लगानी गर्ने बहानामा कर छल्ने र राज्यलाई कालोधनको मारबाट थला पार्ने गरेको एउटा दृष्टान्त सार्वजनिक भयो। उहाँ एनसीएलकाण्डमा पनि आरोपित हुनुहुन्छ। एनआरएन सम्बद्ध काण्ड भएकोले यसबारे समेत बहस हुनु र सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी मागिनु सर्वथा जायज हुने थियो । राज्यले समेत डायस्पोराका नेपालीहरुको आवाजलाई अनुसन्धानको दायरामा लगेर कारवाही चलाउन सक्थ्यो । तर दुखको कुरा जनचासो हुँदाहुँदै पनि ति कुरामा उचित ध्यान दिइएन। अबको नेतृत्वले यसबारे नीति बनाएर कार्य गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सेलहरु मर्न थाले भने जीवित मान्छे डराउनु पर्छ। किनकि त्यसले जिबनलाई समाप्ति तर्फ लग्छ। कुन ठाउँमा उभियौँ भने सबैलाई देख्न सकिन्छ तपाइलाई राम्रोसंग थाहा छ, कुमारजी । बिध्वान र नीति निर्माणमा दक्ष महासचिव डा हेमराज सर पाउनु भएको छ। समय छोटो छ। खासमा दुई बर्षमा तपाइले आगामी बाटो निर्माण गर्न सक्नु हुन्छ, आशाको बिरुवा रोप्न सक्नु हुन्छ तर त्यसको फल तपाइँ पाछिको भविष्यले टिप्ने छ। त्यसपछि तपाइको संसारभरिका एनआरएनहरुले सम्मान पुर्वक गौरबको गित गाउने छन। यो नै तपाइका सिंगो पुस्ताहरुको अमुल्य सम्पति हुने छ। मलाई थाहा छ,तपाइले त्यो हिम्मत जुटाउने प्रयत्न पक्कै गर्नु हुने छ। तपाइँ प्रतिको ठूलो विश्वास, मैत्री, सद्भावना र भरोसाका कारण मैले यो पत्र लेखेको हुँ। संगठन भित्रका झमेला, बिकृति र बेथितिलाई सम्पूर्ण केन्द्रिय टिम मिल्नुभयो भने हटाउन सक्नु हुन्छ । त्यो नहटाएसम्म एनआरएनए बिकृतिको उदाहरण मात्र बनिरहने छ। जुन तपाई लगायत सबै एनआरएनए अग्रजहरुको अपमान हो। स्थिति अझै सन्तुलित नै छ र सबैले तपाइको प्रथम उदयलाई धैर्यतापुर्वक हेरेका छन्। तपाइको पहिलो औपचारिक पाइलाको प्रतीक्षामा विश्वभरिका एनआरएन ब्याग्र छन्। रुपान्तरणको लागि अझै धेरै ढिला भएको छैन। भर्खरैबाट पर्न थालेको चिरालाई रुपान्तरित कार्य योजना र शैलीले टाल्न सकिन्छ,चिसा डामहरु पुछ्न सकिन्छ। तपाइप्रतिको अगाध आशा सहितको ब्याग्रतालाई पनि बिगतले चुनौती दिइरह्यो भने समयले राम राम मात्र भन्ने छ ‘।
डायस्पोराका ८० लाख नेपालीको अध्यक्ष बन्न सफल हुनु भएकोमा तपाइ लगायत सम्पूर्ण केन्द्रिय टीमलाई हार्दिक बधाई तथा रुपान्तरणमुखी कार्यकालको शुभकामना !!